Nagu saabsan - Hebei JiaTian Import & Dhoofinta Co., Ltd.
Hebei JiaTian Import & Dhoofinta Co., Ltd.oo la aasaasay 2002, kuna saleysan magaalada Shijiazhuang province gobolka Hebei, ayaa ku hawlan dhoofinta dharka in ka badan toban sano. Waxaa la aasaasay macaamil ganacsi muddo dheer ah oo lala yeelanayo Yurub, Koonfur Afrika iyo meelo kale iyo alaabooyin u badan dhallaanka iyo dharka carruurta. tan iyo markii la aasaasay, shirkadeena waxay u hogaansantaa mabda'a "kalsoonida iyo hufnaanta" marka hore ， wax ku ool ah oo hal abuur leh ， oo la taagan mabaadi'daas, waxaan xoojineynaa isku xirnaanta iyo iskaashiga macaamiisha. Shirkaddu waxay fiiro gaar ah u leedahay qorista beerashada iyo dejinta awoodaha ugu wanaagsan ee dadka, iyo dadaal ku saabsan ku beerista shaqaale leh anshax wanaagsan oo shaqo, si horumarka shirkaddu u noqoto mid caafimaad qabta oo waarta horay u socota.
Qeybinta suuqyada dibada ：
Shirkadeena ayaa sumcad wanaagsan ku heshay suuqa caalamiga ah. Hadda waxaan dhiseynaa xiriir ganacsi oo aan la leenahay macaamiisha in ka badan shan iyo toban degmo iyo deegaano. Suuqa ugu weyn wuxuu ku yaal Hong Kong, Yurub iyo Koonfur Afrika.
In ka badan soddon wax soo saar, waxaan leenahay waaya-aragnimo fara badan oo aan ku soo saari karno wax soo saarka dhoofinta iyo sidoo kale nidaam maamul oo tayo leh oo adag.
Hebei Jiatian Soo Dhoofinta iyo Dhoofinta CO., LTD waxay si dhakhso leh u horumarisaa sannadihii ugu dambeeyay. Qiimaheena dhoofinta sanadlaha ah wuxuu gaari karaa 25 milyan oo doolarka Mareykanka ah.